OGAALKA SOOMAALI-WEYN Qaybtii 8aad.W/Q.C/naasir Guray Meecaad. |
OGAALKA SOOMAALI-WEYN Qaybtii 8aad.W/Q.C/naasir Guray Meecaad.
Sabab-kasta haku dhacdee dilkaasi lala beegsadey rag kamid horseedkii Fallaago, waxaa ka dhashay nac iyo is-diid ku tallaalmey qabaa’ilkii ku dhaqnaa gobolka Mudug. Gaar ahaan labada garab ee ah Daarood iyo Hawiye. Waxaan shaki ku jirin gumeystihii Talyaaniga oo aragtida dowladdoodu ay ku dhisneyd faashiyad iyo dadka oo la kala qeybiyo, in dhacadadii ay u noqotey fursad u bilatey mashruuciisii gumeysi-doonka ahaa. Wuxuu markiiba ku dadaaley in uu maal-gelin ku sameeyo si ay ugu midha-dhasho. Waxaa halkaas ku hir-galey aragtidii ay gumeystayaashu ku caan baxeen ee ahayd kala-gee dabadeedna gumee.
Raqda kii dhigiyo kii la yidhi reerka orod caymi
Ee gudaha Ceel-buur fadhiya war iga gaadhsiiya
Labadaas gabey waxay tusaale-dhig u yihiin, xilligaas qallafsan kala fogaanshaha ku yimid bulshadii Soomaaliyeed. Meel kasta oo ay aragtida Soomaali-wayn ka guntami lahayd, gumeystaha ayaa shiishka saarey si uu u toogto oo uusan u xidhmin xarig-ummadeed. Sawir lamid ah buu ahaa sawirka maanta jira oo caadifaddu ay garwadeenku ka noqotey, caqligii lagu kala qiimeyn lahaa saxa iyo khaladkana uu bulshadu ku yaraadey. Waxay ahayd goor dhulkii Soomaaliyeed uu gacanta u galay gumeysi caddaan iyo madow leh. Laba gobol oo keliya ayaa maamulkii gumeysiga uusan xilligaas weli si buuxa u gaadhin. Waxay ahaayeen labada gobol ee ah Mudug iyo Majeertiinya. Iyaguna sida muuqata maamulkii Talyaaniga ayaa dhanka koonfureed uga soo sikanayay.
“ Dhab ahaan nadaamkii fashiistada ahaa wuxuu arimahan ku heley natiijo uga wanaagsan tii uu ku heli lahaa ololaha ciidmaeed. Weerarkii iska-caabinta ahaana si qabow ayuu hoos ugu dhacay. Degaankiina fowda ayaa ka bilaabatey, taas oo guul u ahayd siyaasaddii cusbeyd ee gumeysiga“.(The Collapse of the Somali State: The Impact of the Colonial Legacy, Abdisalaam Issa Salwe. 1996. London -UK).
Qallinka:C/naasir Guray Meecaad.
Xigasho:Qoraalo dhaxal gal ah oo uu diyaariyay Dr Saadiq Eenow.